I-Ultra Luxurious Pvt House kweyona ndawo inkulu. - I-Airbnb
I-Ultra Luxurious Pvt House kweyona ndawo inkulu.
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguAditya
I-Ultra Luxurious Banglow yaBucala eneziNcedo eziPheleleyo kunye neNtuthuzelo, kweyona ndawo inkulu yase-Ahmedabad kwi-S.G.H'way kunye ne-Iscon Mall Road. Umkhathaleli osisigxina uyafumaneka. Imizuzu nje emi-3 ukuya kwi-SG H'way, ukufikelela kwe-BRTS, indlela ye-S.P Ring, iRajpath, iKarnavati kunye ne-07 Club. Indlu ene-Air-conditioning ngokupheleleyo enamanzi ashushu nabandayo kunye namanzi ashushu kunye neNkqubo yoxinzelelo lweBhafu eyonwabisayo. Iimoto ezi-2 zokupaka kunye nokupaka okongeziweyo eluntwini ngoKhuseleko lweeyure ezingama-24 kunye neCCTV yokusinda. Yonwabela ukuhlala okuMangalisayo ngoBucala obupheleleyo
Amagumbi abanzi, ifanitshala esandula ukulungiswa kunye namagumbi okuhlambela enza ukuba le ndawo ilungele abo babeka intuthuzelo njengeyona nto iphambili. Kwakhona umnakekeli uyafumaneka ixesha elizeleyo kulo naluphi na uncedo kwiiNdwendwe.
Ejikelezwe ngoBuhlaza kunye noluntu olucocekileyo kwiiBhanki ze-Ambli Lake kunye neTempile eFamous Shivji kunye neBanglauws yanamhlanje yangasese yabantu abadumileyo be-Ahmedabad, Le ndawo ihambelana ngokufanelekileyo kwabo bafuna i-Luxury kunye neNtuthuko yokuhlala apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Aditya
Usapho lwam kunye noMkhathaleli bazakubakhona ukuze bancede iiNdwendwe zam nangaliphi na ixesha.